Tantaran'ny orinasa | Solid Products Co., Ltd.
Nanangana Andriamatoa Zhao Hangzhou Chengxin Steel Varotra mpiara., toy ny Mpanome alalana an'ny vokatra vy ary manainga antsamotady HO AN'NY Grid nasionaly, izay ao amin'ny China Top 100 avy amin'ny Fortune Magazine. Androany dia mbola eo amin'ny sehatry ny famokarana vy izahay amin'ny maha orinasa mpanampy anay.
Nanomboka ny famokarana izahay tamin'ny fanaovana roa Tady sy Webbing. Fa amin'io fotoana io dia mampiasa izahayPolypropylenekofehy ho fitaovantsika. Ka ny famokarana dia natao indrindraAdidy antonony sy maivana vokatra.
Nividy ny taninay tany Anji akaikin'ny tanànan'i Hangzhou izahay ary nanangana a Trano 3-gorodona(miaraka amin'ny 8500 metatra toradroa) amin'ny orinasa mpanenona. Nanomboka teo dia isikamanitatra ny orinasantsika manomboka amin'ny vokatra Medium sy Light Duty ka hatramin'ny Super Heavy ary Vokatra mavesatra HO AN'NY na ny mpanjifa na ny vokatra indostrialy.
Manitatra ny vokatray manomboka amin'ny 1 Building ka hatramin'ny Trano 3. Ary ankehitriny manana trano 2 fanampiny izahay, ny iray ho an'ny orinasa vy ary ny iray hanaovana fitsapana ary koa ho an'ny trano fanatobiana entana. Tapitra tanteraka izany15.000 metatra toradroa.
Androany izahay dia miasa eo ambanin'ny marika an'ny Solid Products Co. manolotra ny mpanjifanay miaraka amin'ny Cargo Control & Bungee Cords vokatra ho an'ny tsenan'ny mpanjifa, ary entana maro karazana Mikapoka sy manainga vokatra ho an'ny tsenan'ny indostria.